Ndị ọrụ ugbo Lithuania amalitela iwe ihe ubi poteto - Magazin Sistemu Potato
Isi Omume / Etu
Ndị ọrụ ugbo Lithuania na-amalite iweta poteto
в News, Omume / Etu
Ndị ọrụ ugbo Lithuania gwupụtala nduku mbụ: ngwaahịa niile dị n'ahịa na ụlọ ahịa ejirila cents ole na ole kwa kilogram rịa ọnụ ahịa. Ụlọ ọrụ mgbasa ozi BALTNEWS.
Owuwe ihe ubi mbụ nke poteto Lithuania dị na shelf na 1,5 euro kwa kilogram. Dị ka ndị ọkachamara si kwuo, ọnụ ahịa ejirila cents iri rịgoro n'afọ gara aga, na ego ndị ọrụ ugbo agbadala.
Dị ka Martynas Laukaitis, onye isi nke Suvalkie Vegetables na-akwado, ihu igwe dị ugbu a nwere ike imebi ihe ubi - na ogo Celsius 18 dị mma, mmiri ozuzo na-agbachibido ubi ahụ, ọbụlagodi idekọ idekọ.
Dị ka ndị ọrụ ugbo si kwuo, ọ gaghị ekwe omume ịkọ ọnụahịa nke owuwe ihe ubi n'ọdịnihu, ihe niile na-adabere ugbu a na ahịa. Ruo mgbe ha nwetara ọbụna ọkara nke ego, ihe niile na-aga intermediaries.
isi: Ụlọ ọrụ mgbasa ozi BALTNEWS
Tags: Lithuaniaọhụrụ ndukundi oru ugbomkpụrụ osisi nduku
Teknụzụ ọgbara ọhụrụ: ịmịcha na-adịghị ize ndụ
Ntụziaka nduku nke CJSC "BAYSAD": NTỤTA UTO